घरै बसेर सन्दीप क्षेत्रीले बनाए फिल्म, महजोडीदेखि दीपा-दीपकसम्म :: Setopati
घरै बसेर सन्दीप क्षेत्रीले बनाए फिल्म, महजोडीदेखि दीपा-दीपकसम्म फिल्म हेर्नुस् युट्युबमा
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, वैशाख २९
लकडाउनमा बस्नु परेकाले यो बेला प्राय: सबैलाई निस्कनु त कहाँ जानु, घरभित्रै पनि कसरी समय बिताउनु भन्ने छटपटी छ। चिरपरिचित हाँस्य कलाकार, स्ट्यान्डप कमेडियन तथा 'ह्वाट द फ्लप' कार्यक्रमका प्रस्तोता सन्दीप क्षेत्री यस्तै छटपटीमा छन्।
उनी कसरी हुन्छ, घर बाहिर निस्कने दाउमा छन्। कहिले साथी भेट्ने, कहिले गितार सिक्ने त कहिले टाढा रहेका बुवालाई भेट्ने निहुँ। घरबाहिर निस्कन खोज्ने उनका हरेक बहाना असफल भएका छन्।
सन्दीपको विचलित पारा देखेर उनका दाइले गाली गर्छन्। काकाले आफैं गितार सिकाइदिने कुरा गर्छन्। अर्का काकाले अनलाइन लुडो खेलौं भन्छन्। दिदीले मीठा-मीठा परिकार बनाएर खुवाउँछिन्।
यस्तै छटपटीले भरिएको सन्दीपको दैनिकी उनको वास्तविक जीवनको कथा भने होइन। यो उनले लकडाउनकै समय सदुपयोग गर्दै बनाएको सन्देशमूलक छोटो फिल्म 'लकडाउन'को कथा हो।
कथामा घरका सबभन्दा कान्छा उनी 'छुकछुके' छन्। हामीले मनोरञ्जन क्षेत्रमा देख्दै आएका सन्दीपजस्तै। घरबाहिर निस्केर रमाउन खोज्ने उनी बहिर्मुखी पात्रका रूपमा देखिन्छन्।
उनको चरित्रले यो लामो लकडाउनमा घरमै थन्किनु पर्दा विरक्त मानिसको भावना प्रतिनिधित्व गरेको छ।
उनीसँगै पर्दामा महजोडी मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य, दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, किरण केसी, निर्मल शर्मा र गायक सञ्जय श्रेष्ठलाई पनि देख्न सक्छौं।
कथाअनुसार यी सबै पात्र एकै छतमुनिका परिवार हुन्। फिल्ममा सन्दीपका बुवाको भूमिका निर्वाह गरेका मदनकृष्ण मात्रै केही पर छन्। फिल्म सुटिङ सबैले आ-आफ्नै घरबाट गरेका हुन्। लकडाउनको पालना गर्दै बनाइएको यो फिल्मको खास विशेषता यही हो।
झन्डै १० मिनेट लामो यो फिल्ममा लकडाउनको समय कसरी बिताउने? कलाकारहरूले कसरी बिताइरहेका होलान्? यस्तो समयमा के गर्नु उचित र के गर्नु अनुचित? कोरोना भाइरसबाट बच्न के कस्ता उपाय अपनाउनु जरुरी छ? लगायतका अहिले जनमानसले बुझ्नै पर्ने केही प्रश्नको उत्तर पाउन सक्छौं।
केही उत्तर लुकेर आएका छन् भने केही खुलेरै आएका छन्।
कथाका पात्र दीपकराज गिरी अहिले दैनिकीमा फिल्मको पटकथा तयार पार्दै होलान्। यही देखाइएको छ 'लकडाउन'मा। भाइ सन्दीपले बाहिर जाने जिद्दी र घरभित्र यता-उता गरिरहँदा भएको हल्लाले उनी 'डिस्टर्ब्ड' हुन्छन्। वास्तवमै घरका केही सदस्य काममा भए यसप्रकारको बानीले जो-कोही विचलित हुन सक्छन्।
दिदी दीपाले परिवारका लागि मीठो परिकार तयार गर्दैछन्। तर खाना खाएपछि भाँडा भने भाइलाई माझ्न भनेकी छन्। दीपा यो भनाइसँगै लुकेको सन्देश हो, 'महिलाले मात्र खाना बनाउने, सरसफाइ गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। सबैले पालैपालो घरायसी काममा सहयोग गर्नुपर्छ।'
'यस्तो समयमा के सन्देश दिनेभन्दा पनि कसले दिएको भन्ने विषयले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ,' निर्देशक सन्दीपले सेतोपाटीसँग टेलिफोन वार्तामा भने, 'अहिलेको समयमा सबैलाई के गर्न हुने-नहुने चेतना छ। तर समाजका चिरपरिचित अनुहारले केही सन्देश दिए त्यो थप प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यता राखेर यो फिल्म तयार पारेँ।'
लकडाउन नभइदिएको भए यति बेला सन्दीप कुनै विदेश भ्रमणमा हुन्थे होला। कोरोना भाइरस महामारी फैलिएसँगै सबै काममा 'ब्रेक' लाग्यो। उनको 'ह्वाट द फ्लप' कार्यक्रमका लागि नयाँ भाग सुट गर्न नमिल्ने भयो। सामाजिक दुरीका नियम कडाइ साथ पालना गर्दै घरै बस्न थाले।
यही अवधिमा आफ्नै युट्युब च्यानल सुरू गरे। 'लकडाउन' फिल्म उनकै आधिकारिक च्यानलमार्फत अपलोड गरिएको छ।
लकडाउनको यो अवधिमा निकै लामो समय घरमै बिताउन पाउँदा सन्दीपले आफूले आफैंलाई नियाल्ने समय पाएको महशुस गरेका छन्। यसअघि गरेका काम पुनः पल्टाएर हेर्ने मौका पाएका छन्। उनकै भाषामा भन्दा, 'यो समय रिक्रिएसन र रिभिजनका लागि दिइएको समयजस्तै भएको छ।'
आफ्नो व्यस्त समयबाट उनले अहिले केही फुर्सद पाएको बताउँछन्। त्यही फुर्सदिलो समय सदुपयोग गर्ने सोचसँगै उनले 'लकडाउन' तयार पारेका हुन्।
सामाजिक दुरीमा रहेर पनि यस्तो सन्देशमूलक फिल्म तयार पार्न सकिन्छ भन्ने आइडिया भने आफ्नै नभएको बताउँछन्। उनले बलिउडको 'स्टे होम, स्टे सेफ' छोटो भिडिओबाट प्रेरणा लिएका हुन्।
प्रशुन पाण्डेद्वारा निर्देशित उक्त भिडिओमा बलिउडका दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन, रजनीकान्त, रणवीर कपुर, प्रियंका चोपडा, आलिया भट्टलगायत कलाकार छन्। सबैले आ-आफ्नो घरबाट सुटिङ गरेर भिडिओ तयार पारेका छन्। भिडिओको मूल सन्देश 'लकडाउन अवधिभर घरै बसौं' भन्ने छ।
उक्त भिडिओ हेरेपछि सन्दीपलाई पनि केही कथा जोडेर फिल्म तयार पार्ने इच्छा पलायो। नेपाली समाजले गन्ने-मान्ने र चिनिआएकामध्ये केही कलाकारसँग यस विषयमा कुरा गरे। जतिसँग कुरा गरे सबैको प्रतिक्रिया सकारात्मक आएपछि सन्दीपलाई थप हौसला मिल्यो।
'सबैसँग कुरा भएपछि पटकथा तयार पारेँ। हौसलासँगै उत्तेजना पनि बढ्यो,' उनले भने, 'तर दिमागमा भएर मात्र नहुँदो रहेछ। त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने, सोच्नु निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो। कथासँगै सन्देशमूलक छोटो फिल्म तयार पार्ने योजना थियो।'
पटकथा तयार भएपछि सबै कलाकारलाई पढ्न पठाइयो। उनीहरूले केही संवाद थपघट गर्न सहयोग गरे। आ-आफ्ना संवाद खिचे र सन्दीपलाई पठाए।
'तर सबैको भिडिओ क्लिप जोड्दा केही समस्या आइपरे। रि-टेक लिनुपर्ने भयो। सबैले घरबाटै खिच्ने भए पनि फिल्म छुट्टाछुट्टै टुक्रा जस्तो देखाउनु त भएन! यस्तोमा दायाँबाट बोल्दा अर्को व्यक्ति बायाँ हुनुपर्ने, एउटै घरभित्र जस्तो देखाउन ढोका भएको ठाउँदेखि को कताबाट गएको भन्ने सबै ख्याल गर्नुपर्ने थियो। अनुक्रम नमिलेपछि दोहोरो टेक माग्नु पर्दा केही अप्ठ्यारो पनि आइपर्यो,' सन्दीपले फिल्म तयार गर्दाको अनुभव सुनाए।
झन्डै सात दिनको मिहिनेतपछि फिल्म तयार भयो। तयार भएसँगै युट्युबमा अपलोड गरिहाले।
फिल्मले घरै बसेर पनि अन्य काम गर्न, नयाँ सीप सिक्न र आफूलाई व्यस्त राख्न नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिनेजस्ता सन्देश पनि दिन खोजेको छ।
दीपकराज गिरी र हरिवंश आचार्य कथामा आफ्नो फिल्म क्षेत्रको काममा व्यस्त भएको देखाइएको छ भने गायक सञ्जय श्रेष्ठ आफ्नो गीतको 'रिहर्सल' गर्दैछन्। निर्मल शर्मा आफूलाई 'फिट' राख्न खोज्दैछन्।
आफैंलाई मनोरञ्जन दिन र समय कटाउन किरण केसी अनलाइनमा लुडो खेल्ने भन्दैछन्। प्रविधिबारे बुझ्दै अन्तमा मदन कृष्ण 'जुम' एप चलाउन खोज्दैछन्।
त्यस्तै राहत कसले लिने/नलिने भन्ने विषय पनि कथामा जोडिएको छ।
सामाजिक दुरी कायम राखे पनि भावनात्मक दुरी नजिक राख्ने सन्देशलाई समेत फिल्म 'लकडाउन'ले समेटेको छ। सरकारले भनेका नियम पालना गर्न आग्रहसँगै फिल्म निकै रमाइलो ढंगमा सकिन्छ।
सन्दीप घरै बस्न सहमत हुन्छन्।
फिल्म सार्वजनिक भएपछि दर्शकहरूको सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेको सन्दीप बताउँछन्। केही कमी-कमजोरीका बाबजुद उनी आफैं पनि सोचेभन्दा राम्रो नतिजा आएको बताउँछन्।
दुई साता अघिमात्र अपलोड गरिएको यो फिल्ममा हालसम्म १ लाख २० हजार बढी भ्युज पुगिसकेको छ।
यसमा सन्दीपलगायत सबै टोली निकै खुसी छन्। धेरै दर्शकले यसको दोस्रो भाग पनि कुरिरहेका छन् रे। तर यस विषयमा आफूले हालका लागि केही नसोचेको सन्दीप बताउँछन्।
'जे बनेको छ, मिठासका साथ बनेको छ,' उनले भने, 'लकडाउनको समयमा बनाएको यो छोटो फिल्मलाई नै उपलब्धि मानेको छु।'
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २९, २०७७, ०६:४३:००